Nepal Auto | हाइवेमा ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस्
हाइवेमा ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस् 13 Baishak, 2076
हाइवेमा ड्राइभिङ गर्दा ट्राफिकको तनाव त हुँदैन, तर स्पिड र ओभरटेक गर्दा केही कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । हाइवेमा ड्राइभिङको समयमा सानो गल्तीले सबैलाई हानी पु¥याउन सक्छ ।
ओभर स्पिड सधै खतराजनक हुन्छ । हाइवेमा ड्राइभिङ गर्दा मुख्यतया यी कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।
हाइवेमा स्पिड अचानक बढाउनु हुँदैन । सबवेबाट हाइवेमा पुग्दा ड्राइभरको शरीर अचानक स्पिडको साथमा एड्जस्ट गर्न सक्षम हुँदैन । जसको कारण दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ ।
मोडमा ओभरटेक गर्नबाट बच्नु पर्छ । मोडमा ओभरटेक गर्ने समयमा ओभरस्पिडमा ड्राइभिङ पनि गर्न सकिन्छ । जसको कारण कार कन्ट्रोल गर्न कठिन हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले मोडमा जहिले पनि कार स्लो चलाउने गर्नु पर्छ ।
रातको समयमा हाइ बीममा कार चलाउँदा विपरीत दिशाबाट आएको सवारी साधनलाई समस्या हुन सक्छ । विपरीत दिशाबाट आएको चालकलाई तपाईंको कति दुरीमा कार चलाउँदै छ भन्ने अन्दाज गर्न गाह्रो हुन सक्छ जसको कारण दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ ।
हाइवेमा ओभरटेक गर्नको लागि छुट्टै लेन छुट्याइएको हुन्छ । जसलाई साधारणतया प्रयोग गरिएको हुँदैन । जता सजिलो हुन्छ त्यतै बाट ओभरटेक गरेको हुन्छ । यस्तो गर्नु आफूलाई र अरुलाई पनि हानी पु¥याउनु हो ।
ओभरटेक गर्नको लागि जहिले पनि राइड साइडको लेन नै प्रयोग गर्नुपर्छ । हाइवेमा ब्लाइन्ड स्पटमा ओभरटेक गर्दा बढी दुर्घटना हुने सम्भावना रहेको हुन्छ । ब्लाइन्ड स्पटमा अगाडि केही देखिएको हुँदैन जसको कारण ओभरटेक गर्दा खतरा निम्याउन सकिन्छ ।
ट्रक तथा ठूला सवारी साधनसँग जहिले पनि उचित दुरी तय गर्नु पर्छ । कैयौ ट्रकको पछाडि वेरियर रहेको हुन्छ । जसले सानो कारलाई ठक्कर दिने सम्भावना रहेको हुन्छ । यस्तो स्थितिमा आफ्नो कारको एयरब्याग नखुल्न सक्छ । एयरव्यागको सेन्सर बोनटमा हुने भएकोले र विन्डशिल्ड ठोकिएपछि एयरव्याग नखुल्ने आशंका हुन्छ ।
अब मोटरसाइकलमै मोबाइल चार्ज !
मोटरसाइकलबाट पनि स्मार्टफोन चार्ज गर्न सकिने भएको छ । त्यसका लागि मोटरसाइकलमा चा...
केस ब्रान्डको नयाँ ट्रयाक्टर नेपालमा
काठमाडौं – ‘तराई, पहाड, हिमाल, न्यु होल्यान्डको कमाल’ भन्ने नाराका साथ विश्व विज...
कार पेट्रोल किन्ने कि डिजेल ?